कति खर्च गर्न पाउछन उम्मेदवारले ? आयोगले तोक्यो खर्च सिमा — News of The World
कति खर्च गर्न पाउछन उम्मेदवारले ? आयोगले तोक्यो खर्च सिमा
२७ असोज, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी मंषिर १० र २१ गते हुन लागिरहेको संघ र प्रदेशको निर्वाचनको लागि अधिकतम खर्च कति गर्न पाउने भन्ने तोकेको छ ।
शुक्रबार बसेको निर्वाच्न आयोगको बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको अधिकतम खर्च सीमा तोकेको हो । आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फके उम्मेदवारले अधिकतम पच्चीस लाख रुपैंया खर्च गर्न सक्नेछन् ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा उम्मेदवारको संख्या अनुसार प्रति उम्मेदवार रु एक लाख पचास हजार रुपैंयासम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।